Maxaa U Sahlay Neymar Horumarka Ciyaareed Ee Xili-Ciyaareedkan
HomeWararka MaantaMaxaa U Sahlay Neymar Horumarka Ciyaareed Ee Xili-Ciyaareedkan
Siddeed guulood oo isku xigay ayay Real Madrid gaadhay ciyaaraheedii u dambeeyey, waxaana taas mahaddeed iska leh Neymar oo dhaqdhaqaaqa ugu badan iyo goolasha ugu badanba dhaliyey ciyaarihii u dambeeyey.
Waa dhab in uu ku cusub yahay Barcelona, haddana uu ka mid noqday xiddigaha ay kooxdu ku dhaadato, waxase la isweydiiyey maxaa u sahlay in uu guushaas degdegga ah gaadho.
Baadhitaan ay samaysay Jariidadda Marca ee ka soo baxda dalka Spain ayaa baadhitaan iyo dabogal ku isamaysay xaaladda ciyaartoygan, waxaana warbixin ay ka diyaarisay ay ku sheegtay in Neymar uu si fiican u saldhigay Barcelona, isla markaana aanay dhibin la qabsiga ciyaaraha Yurub oo aanu hore u sii aqoonin.
Arrinta koowaad ee u sahashay Neymar guulaha ayay ku sheegtay Jariidaddu in ay tahay in uu isbeddel ku sameeyo qaab ciyaareedkiisa, khaasatan qaabka dhaqdhaqaaq ee jidhkiisa iyo in uu miisaankiisa yareeyo.
Miisaankiisu waxa uu ahaa 64.5kg kaliya markii uu ku biiray Barcelona waxaanay taasi ku keentay mushkilad ah in uu iska caabbin kari waayo ciyaartooyada ka soo horjeeda oo awood jidheed ku isticmaali jiray.
Markaas kadib waxa bilaabantay shaqo cusub. Waxa ay kooxda dhakhaatiirta ee Barcelona isku dayeen in ay ka caawiyaan Neymar sidii uu muruqyo u yeelan lahaa, waxaanay noqotay guul uu laacibkani ka gaadhay ciyaaraha sannadkan. Waxa uu qaataa tababar ka badan inta ciyaartooyada kale, kuwaas oo isugu jira jidh dhisid, cuntooyin gaar ah oo isku dheelli tiran iyo waliba Fiitamiino dheeraad ah. Waxa intaa u raaca in uu si jogto ah utago xarunta jimicsiga jidhka (Gym).
Marka ay ciyaartooyada kale hoydaan ee uu dhamaado tababarka caadiga ah, waxa uu bilaabaa in uu miisaankiisa kor u qaado. Wuxuu dhisaa Muruqyada lugaha iyo shafka.
Waxay u muuqataa arrin lagu guuleystay, waayo kor ayay u kacdayy awooddiisu, waxa uu u adkaysan karaa iskana caabiyi karaa hirdanka jidheed ee kuwa ka soo hor jeeda.
Ronaldinho Oo Ku Dhawaaqay Inaanu Ka Fadhiisanayn Kubada Cagta
Shan Arrimood Oo Loo Nisbaynayo Barbarraha Xidhiidhka noqday Ee Real Madrid
26/09/2016 Abdiwahab Ahmed
Pogba: “Riyadaydu Waa Inaan U Ciyaaro Barcelona Oo Aan Messi Ag Istaago”
02/06/2015 Abdiwahab Ahmed